प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको छैनः अर्जुननरसिंह केसी « Pahilo News
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको छैनः अर्जुननरसिंह केसी
प्रकाशित मिति : 13 July, 2016 9:40 am
सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको भन्दै बाहिर चर्चा गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस भित्र भने फरक–फरक धारणा बाहिर आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले औपचारिक निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिए पनि शर्तसहित दिने दाबी गरेका छन् । केसीसँग गरेको छोटो कुराकानीः
नौ महिनाको गठबन्धन तोडेर माओवादी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?
हामी आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छौँ । त्यो बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा अरु विकल्पमा जाने भन्ने संस्थागत निर्णय गर्ने छ । माओवादीले अहिलेको सरकारसँगको गठबन्धन तोडेपछि राजनीतिमा निश्चित रुपले नयाँ तरंग पैदा भएको छ । हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले राष्ट्रको आवश्यकतालाई महशुस गरेर निर्णय लिन्छौँ । त्यसका लागि सबै विकल्पलाई खुला राखेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।
नेपाली कांग्रेसले त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएपछि मात्र माओवादी सरकारबाट फिर्ता आएको भन्ने चर्चा छ नि ?
वार्ता र संवाद विभिन्न चरणमा भएकै हो । माओवादीसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा केही अघि पनि भएकै हो । तर, अहिले माओवादी सरकारी गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । त्यसपछिको परिस्थिति अलग भएको छ । त्यसलाई हामीले अलग ढंगले विश्लेषण गरेका छौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी र संसद्को सबै भन्दा ठूलो दल भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी नेपाली कांग्रेसकै हुन्छ । यद्यपि हामी विकल्पहरुको खोजिमा छौँ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्छ भनेर माओवादीसँग मात्र होइन हामीले अन्य दलसँग पनि वार्ता र छलफल गरेकाले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री दिने औपचारिक सहमति भएको छैन ।
माओवादीले त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरामा कांग्रेसले ल्याप्चे लगाई सक्यो भन्दै आएको छ नि त ?
राजनीतिमा भन्ने एउटा कुरा हुन्छ । औपचारिक र संस्थागत गर्ने निर्णयहरु आफ्नै प्रकारका हुन्छन् । माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पद दिने अवस्था आइहाले पनि शर्तसहित हुनेछ । त्यो पनि औपचारिक निर्णय नभई सकेको अवस्थामा यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । विश्वास गर्ने एउटा कुरा हो औपचारिक निर्णय भएको छैन । केही समहति भएका होलान् । तर, औपचारिक निर्णय लिने थलो केन्द्रीय कमिटी नै हो ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको संभावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
त्यो संभावना निकै कम छ । त्यो वातावरण एमालेले नै निर्माण गर्न सकेन ।